Taakuleynta Dharka Calanka ugu Fiican- Soo-saarista iyo Warshadda Sare | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Calaamadda Tooska ah ee Calanka Banner taagan ayaa laga hagaajiyay bandhigyada toosan ee soo jireenka ah. Saamaynta bandhig ka fiican iyo xulashooyin badan.
Noo soo dir hadda iibso
Ku Muuji Badeecadahaaga iyo Noocyadaada qaab Kale
Boodhadhka boodhadhka dharka ayaa helaya caan caan ah sababtoo ah jaangooyooyin fudud oo daabacan oo firfircoon. Joogtada toosan ee dharka, oo u eg calanka duubista xagga aragtida, ayaa beddel weyn u ah calanka duuban ee sida caadiga ah loo isticmaalo. Dharka toosan ee dharka toosan wuxuu leeyahay saldhig adag oo adag, taas oo ka dhigaysa inay istaagto xitaa maalmaha dabaysha qaarkood.
Dharka la waarayo ayaa kaa dhigaya mid ku raaxeysta isticmaalka muddada dheer
Dharka loo isticmaalo sameynta dharka istaaga waa mid khafiif ah waana la laaban karaa, taas oo sahleysa in la raro oo la raro. Isla mar ahaantaana, dharka, oo ka duwan qalabka kale, waa la dhaqi karaa oo la isticmaali karaa muddo dheer.
240g Xiisad Dhar
280g Dharka Xannibaadda
Ku Soo Bandhigida Astaantaada iyo Ganacsigaaga Qaab Toosan
Markaad ku daabacayso dharka, waxaa jira laba ikhtiyaar oo adiga kugu habboon: sawiro hal dhinac ah iyo laba dhinac leh. Waxaad dooran kartaa nooca ugu habboon si kor loogu qaado muuqaalkaaga. Haddii miisaaniyaddu xadidan tahay, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay midka garaafka leh ee daabacan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad soo bandhigto farriimahaaga si aad u ballaaran, joogitaanka dharka daabacan ee labanlaaban ayaa adiga kuugu habboon.
Banner dhar isku dhejis ah oo taagan cabirro kala duwan
Boodhadhka banner dharkani waa cabbirro kala duwan waxaana loo isticmaali karaa marar badan. Haddii aad leedahay meel suuqgeyn aad u xaddidan, ka dibna banner dhar 2ft ah ayaa shaqeyn doona. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeclaan lahayd inaad abuurto muuqaal rafcaan leh, waxaad dooran kartaa midka cabirkiisu yahay 5ft. Haddii aadan hubin midka ku habboon dhacdadaada, kaliya noo soo dir email iyo wakiilkayaga iibinta xirfadleyda ayaa kaa caawin doona.
Display Pop Up Display
Joogitaanka Muuqaalka Muuqaalka
Teendhada Xayeysiinta 10 × 10 Midab Buuxda La daabacay
10 × 20 Custom Pop Up Teendhada
10 × 15 EZ Up Teendhada Nano Dhakhso ah
Calanka Calanka Dharka - Heerka
Calanka-Convex ee Xayeysiinta
Calaamadaha Top Table